Suuqgeynta Moobaylku Waxay Ku Soo Laabatay Vogue - Sidee Aasaasiga U Samayn Karaa Sumcaduhu Oo Kor U Qaadi Karaan Ololayaasha Mobilkooda? | Martech Zone
Qof kastaa wuu aqbalayaa meel kasta oo ay joogaan aaladaha mobilada. Suuqyo badan maanta - gaar ahaan kuwa dunida soo koraya - maahan arrin si fudud u jirta mobilada marka hore laakiin mobile kaliya.
Suuqgeeyayaasha, masiibada ayaa deddejisay u dhaqaaqida dhijitaalka ah isla markaana awooda lagu beegsado isticmaalayaasha iyada oo loo sii marayo cookies-ka qolo saddexaad oo meesha laga saaray.
Tani waxay ka dhigan tahay in kanaalada tooska ah ee mobilada ay hadda aad uga sii muhiimsan yihiin, in kasta oo magacyo badan ay wali si wada jir ah u xidhxidhayaan ololayaasha suuqgeyneed ee aamusan iyo kuwa kala duwan ee si aan qarsoodi ahayn u soo afjaraya farqiga u dhexeeya dhaqanka internetka iyo mobilada marka hore qaababka.
Waxaa jira dhibco xanuun badan, gaar ahaan la'aanta aqoonsiga isticmaalaha joogtada ah ee qaybaha kala duwan iyo kanaalada. Isticmaalaha ugu dambeeya inta badan wuxuu ku dhamaanayaa in si xad dhaaf ah loo faafiyo, fariinta calaamadduna waxay ku dhammaata mid aan is waafaqsanayn - ama gebi ahaanba luntay.
Upstream horumaray ay Grow Suuqgeynta mobilada si wax looga qabto arrimahan. Waxay daaha ka rogtay masraxa sida masiibada COVID-19 u rogtay adduunka oo dhan ugana dhigtay ka-qaybgalka dhijitaalka ah lama huraan halkii ay ku raaxaysan lahayd ganacsiyada intooda badan.
Hadaba Waa Maxay Koritaan?
Aan ku bilowno aasaaska. Grow waa suuqgeyn dhijitaal ah oo u sahlaysa ururrada in ay gaarsiiyaan ka-qaybgalka macaamiisha channel-ka badan, inta badan iyaga oo isticmaalaya aaladaha mobilada, iyaga oo isticmaalaya kanaalada sida mareegaha moobiilka, SMS, RCS, ogeysiisyada aaladaha iyo shabakadaha bulshada. Waxaa loo bixiyaa sidii madal iskeed ugu adeegta oo loogu talagalay automation-ka suuqgeynta. Si kastaba ha ahaatee, Upstream waxa kale oo ay leedahay bixinta adeeg la maareeyey, kaas oo si fiican uga shaqeeya xaaladaha ay macaamiishu ayan haysan xajmi dheeri ah ama khibrad ay ku socodsiiyaan ololayaasha suuqgeynta dhijitaalka ah ee casriga ah.
Madashu waxay higsanaysaa inay noqoto a hal-stop-shop loogu talagalay sumadaha. Waxay isu keentaa abuurista nuxurka, qalabaynta ololaha, falanqaynta, aragtida dhagaystayaasha, ka hortagga xayaysiiska iyo awoodaha maaraynta kanaalka hal madal.
Tallaabada ugu horreysa waa abuurista via the Ololaha Studio halkaas oo macaamiishu ay ku abuuri karaan dhaqdhaqaaq firfircoon, safarro kanaal badan ah, iyada oo aan lahayn wax khibrad kood ah. Waa waayo-aragnimo dareen leh, iyadoo la adeegsanayo jiidid iyo hoos u dhigid si loo dhiso, wax uga beddelo oo loo eego khibrad adeegsade kasta.
Xiga ayaa imanaya miisaan. The Gaadiidka Suuqgeynta Aaladu waxay u ogolaataa ururadu inay si toos ah u socodsiiyaan socodka suuq-geynta macmiilkiiba si ay u gaadhaan wadooyin wax iibsiga oo habaysan, si suuq-geynta miisaanku ay wali u dareemi karto inay khusayso, xaalad ahaan-ka warqabid iyo shakhsi ahaanba.
The Maamulka Dhageystayaasha waxay u ogolaataa ganacsiyada inay helaan, maamulaan, qeexaan, falanqeeyaan oo ay dhaqaajiyaan xogta macaamiisha si loo fuliyo olole sax ah oo ka baxsan xogta aasaasiga ah si miisaaniyada si wanaagsan loo qoondeeyo.
Ka dibna waxaa jira Fahanka iyo Falanqaynta muuqaalada, kuwaas oo ka samaysan laf dhabarta ee madal koritaanka. Marka la geliyo tiro badan oo xog ah shaqada, ganacsiyadu waxay kobcin karaan ololayaasha si ay uga dhigaan kuwo si sii kordhya waxtar u leh waqti ka dib iyagoo ururinaya aragtiyo ku saabsan waxqabadka, ka-qaybgalka, qulqulka, dakhliga iyo wax ka badan.
Ka ilaalinta khayaanada waxay ku timaadaa Secure-D, qaabka ka hortagga khiyaamada ee Upstream, kaas oo ka ilaaliya xayaysiiska xayaysiisyada iyadoo la adeegsanayo xannibaadda xayeysiiska saadaasha ee ku dhex dhisan, xannibaadda qaabka habdhaqanka, habka lacag bixinta, ogeysiisyada qalabka cudurka, hagaajinta, baaritaanka shilka iyo is dhexgal sugan.
Taasi waa sida ay dhammaan ku habboon yihiin. Hadda aynu eegno sida madal ay u isticmaalaan summadaha fikirka hore u raaca.
Iyada oo la dhimay cookies-ka saddexaad ee si adag loo soo bandhigay, calaamad caan ah oo biir ah ayaa loo baahan yahay si ay u bilaabaan xiriir toos ah macaamiisha mid ka mid ah suuqyada muhiimka ah - Brazil. Isbeddelka noocan oo kale ah calaamaddu waxay rabeen inay bilaabaan dhismaha arsenal xisbiga koowaad xogta, si ay u horumariso hab toos ah oo toos ah oo ka qayb qaadashada daawadayaasha iyo kor u qaadida dalabyo cusub - oo si fiican u qoondeeyo miisaaniyadeeda suuqgeyn.
Adoo isticmaalaya Grow madal, summada ayaa awooday inay gasho saldhigga macaamiisha ee hawlwadeenka mobilada ee Brazil - oo siinaya 50MB ee xogta mobilada bilaashka ah si loogu beddelo faahfaahintooda. Todobaad gudihiis, waxa ay soo saartay in ka badan 100,000 oo hoggaan. Tani waxay siisay rajooyin ballaaran oo ay la qabsan karto oo ay u diri karto dalacsiin waxayna dib u cusbooneysiisay awoodeeda suuqgeyneed ee gobolka.
Macmiil kale, oo hormuud ka ah hawl wadeenada isgaadhsiinta Koonfur Afrika, ayaa u baahday in uu kor u qaado la-qaadashada tooska ah ee adeeggeeda baahinta muusiga ee suuqa maxaliga ah. Si kastaba ha ahaatee, hawlwadeenku waxa uu la kulmay arrimo la xidhiidha iibka macaamiisha iyo lacag-ururinta maadaama ololihii hore ee suuqgeyntu aanay si fiican u shaqayn. Muddada dheer, waxay u baahday adeegga cusub si ay madax-ilaa-madax kula tartanto Spotify iyo Apple Music oo ay noqoto adeeg muusik oo weyn oo door ah Koonfur Afrika.
Saddexdii bilood ee ugu horreeyay ololaha, hawlwadeenku wuxuu arkay koror 4x ah oo la yaab leh oo ku saabsan saldhigga adeegsadaha firfircoon ee adeegga qulqulka muusigga. Intii lagu guda jiray ololaha 8-da bilood, ku dhawaad ​​2 milyan (1.8 milyan) macaamiil cusub ayaa la gaarsiiyay adeegga. Kaliya 8 bilood gudahood, calaamaddu waxay u beddeshay adeeg tayo sare leh - laakiin aan shaqaynayn - adeeg dhijitaal ah oo noqday il adag oo dakhli soo noqnoqda ah iyo hoggaamiye suuqa ee booska.
Isku soo wada duuboo, himilada Grow waa in uu suuqgeynta mobilada ka dhigo mid weyn mar kale, iyada oo la siinayo isticmaalayaasha safarka macmiilka ee ugu macquulsan, oo ku habboon shakhsiyadooda iyo baahiyahooda, u keenaya hufnaanta suuqgeyneed heerar cusub oo ganacsiyo ah. Madal ayaa la caddeeyey inay bixiso 3x qiimaha wada hadalka iyo 2x heerarka hawlgelinta marka la barbar dhigo olole dhaqameedka dhijitaalka ah, oo gebi ahaanba eber u baahan maalgashi hore.
Tani waa suuq-geynta mobilada si sax ah loo sameeyay.
Ku saabsan Upstream
Upstream waa shirkad hormood u ah tignoolajiyada dhanka suuq-geynta mobilada ee suuqyada soo koraya ee ugu muhiimsan aduunka. Madalkeeda otomaatiga ah ee suuq-geynta mobaylada, Grow, oo nooceeda ah, waxay isku daraysaa hal-abuurnimada dhinaca automation-ka suuq-geynta iyo xogta, amniga xayaysiisyada khadka tooska ah, iyo isgaarsiinta dhijitaalka ah ee kanaalka badan ee looga golleeyahay in lagu abuuro khibrado gaar ah oo macaamiisha dhamaadka ah. Iyada oo in ka badan 4,000 oo olole suuqgeyneed oo guul leh, kooxda Upstream waxay ka caawisaa macaamiisheeda, noocyada hormuudka ka ah adduunka oo dhan, inay si wax ku ool ah ula xiriiraan macaamiishooda, kordhiyaan iibka dhijitaalka ah oo kor u qaadaan dakhligooda. Xalalka kor u kaca ayaa loogu talagalay macaamiisha 1.2 ee in ka badan 45 waddan ee Latin America, Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya.
Tags: muusiga tufaaxahabdhaqanka xannibiddaxisbiga koowaadkoraankanaalka mnomaamulka dhagaystayaasha mobiladaxogta habdhaqanka mobiladajadwalka ololaha mobiladaabaabulka kanaalka mobaylkamoobil ku shubidhal-abuurka mobiladaxogta tirakoobka mobiladaqalab mobilehawlgelinta mobiladamobilada marka horedhisaha safarka guurguuramobile kpimobil kpismarketing mobileotomaatiga suuq geynta mobiladamadal automation marketing mobileololaha suuq-geynta mobiladaxogta waxqabadka mobileportal mobileogeysiisyada riixa mobilkadib u habaynta mobiladadakhliga mobileabaal-marinaha mobiladaammaanka mobileqaybinta mobiladamobile wareegabeegsiga mobiladaxogta macaamil ganacsi mobileMusicsaadaalinta ai xannibidSpotifykheyraadkor u koraan